राष्ट्रिय एकता दिवस तथा २९७औं पृथ्वी जयन्ती मूल समारोह समितिद्धारा आयोजित एक कार्याक्रममा बोल्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवम् संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङले पृथ्वी नारयण शाहको दिब्योपदेशबाट नै चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भएको बताउनु भएको छ । पृथ्वी नारायण शाहको दिब्यपदेशबाट नै प्रभावित भएर दुई सय वर्ष पछि चीनमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव भएको उहाँको भनाई थियो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उपकुलपति तथा संस्कृति विद् डा. गुरुङले जनताको धर्म संस्कारमा पृथ्वीनारायण शाहले कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको र पृथ्वीनारयणकै उपदेशका कारण भारत र चीनले ठूलो पविर्तन गर्न सकेको बताउनु भयो । र्पथ्वीनारायण शाह एक युग पुरुष भएकाले उहाँको उपदेशलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्नु पर्नेमा डा। गुरुङले जोड दिनु भयो ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता डा। रामशरण महतले बोल्दै राम शाहले आफ्नो छोराहरुलाई अंशको रुपमा भाग लगाइदिएका राज्यहरुलाई पृथ्वी नारयण शाहले विस्तारै एकिकरण गरेका थिए । आफ्नो गोत्रका वंशको हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक ज्ञानबाट प्रभावित पृथ्वीनारायण शाहले बनारशमा गएर गोत्रसमेत परिवर्तन गर्नु उहाँको ठूलो विशेषता भएको डा. महतको भनाई थियो ।
विदेशीलाई नेपाल छिर्न नदिनु र नेपाली मुद्रा विदेश नपठाउनु भन्ने उहाँको तत्कालिन आदेशको पालना भएको र नेपालको एकता अखण्ड राख्न सफल भएको डा। महतको भनाई थियो ।